Maitiro Ekumisikidza Yako PowerPoint Slide Ratidza Mune Imwe Imwe Hwindo yeVirtual Zviitiko | Martech Zone
Sezvo makambani ari kuramba achishanda kubva kumba, huwandu hwemisangano chaiyo hwakawedzera. Ndiri kunyatsoshamiswa nenhamba yemisangano uko muparidzi ane nyaya chaidzo achigovana PowerPoint Mharidzo pachiratidziri. Iniwo handisi kuzvisiya pachangu kubva pane izvi… Ini ndakaita goofed kakati wandei munzira uye ndanonoka kutanga kwewebhuinar nekuda kwenyaya dzandakabaya.
Imwe mhedziso yekumisikidza, zvakadaro, iyo ini ndinoona kuti inogadzirirwa uye inochengetwa neese online online mharidzo yandinoita iko kugona kuvhura iyo PowerPoint kuratidzwa muhwindo pane kutadza kweiyo Yakapihwa neMutauri izvo zvinogona kukuvadza ... kunyanya kana iwe uri kushanda nema multiple skrini. Inogona kuvanza yako chaiyo musangano software kufamba uye kuvhura windows pane akasiyana masikirini… uye kuve kunovhiringidza kwese kwese.
PowerPoint ine yakanakisa… asi zvakaoma kuwana… kuisa paunogona kuve neyako Slide Ratidza rakavhurwa mune yega hwindo pachinzvimbo. Aya marongero anoita kuti iwe ugone kuvhura iyo Mharidzo mune yeSlide Show mode, asi muhwindo rimwe chete zviri nyore kugovana mukati meZoom kana chero imwe online webinar kana musangano software uye nyore kudzora mharidzo yako uchishandisa mbeva yako, kure, kana museve mabhatani.
PowerPoint Slide Ratidza Zvirongwa
Kana iwe ukavhura yako mharidzo yekugadzirisa, pane iyo Slide Show menyu mune yekutanga kufambisa. Iwe uchazoda kubaya Slide Show Zvirongwa:
Paunodzvanya Set Up Slide Show, iwe unozopihwa nesarudzo yekumisikidza iyo Slide Ratidza muhwindo rega. Tarisa iyi sarudzo, tinya OK ... uye Sevha Mharidzo Yako. Yekupedzisira inogona kuve iri danho rakakosha kana iwe uri kugadzirira uye unenge uri kuvhura mharidzo yako gare gare panotanga webinar. Ukasachengeta iyo negadziriro inogonesa, iyo Mharidzo inodzokera kumashure kune Mutauri modhi.
Iyi mharidzo mumuenzaniso wangu imwe yedhijitari kosi yandakaburitsa neButler University iyo yave kushandiswa pasi rese kudzidzisa timu kuRoche. Takaita musangano wepamhepo online tichishandisa Zoom uye takabatanidza dzimba dzekupaza dzeZoom, Jamboards yezviitiko, uye zvinopihwa. Nekuda kweizvi, ini ndaida masendimita ese ematanhatu sikirini yangu kuti ndikwanise kuona makamuri, zvikamu zveI Jamboard, vhidhiyo yevanopinda, zvikamu zvekukurukura, pamwe nemharidzo. Dai ndakavhura iyo PowerPoint muSpeaker mode, ndingadai ndakarasikirwa nemawindows maviri kune iyo chete Slide Show… uye pamwe ndakavanza akati wandei windows anodiwa kumashure kwavo.
Pro Tip: Sevha Iyi Setting Neyakagovaniswa Virtual Tembere
Kana iwe wagadzira iyo Master Slide Show template yesangano rako, ini ndinonyatsokurudzira kuti iwe chengetedza iyo template kaviri… imwe yeSpikicha mode uye imwe yeVirtual mode neiyi sisitimu inogoneswa Nenzira iyoyo, timu yako painogadzirira mharidzo dzayo chaiyo, ivo havafanirwe kuenda kunotsvaga mamiriro aya. Ichazogoneswa otomatiki pavanogadzira uye chengetedza iyo mharidzo. Kana iyo yekutanga show yatanga, inozovhura kumusoro kumusoro kune yega hwindo!
Keynote: Tamba Slideshow Mu Window
Ko zvakadii naKeynote? Keynote zvirokwazvo ane tamba muhwindo Sarudzo iri mhando yeNice. Kana iwe ukabaya Play mukutangisa kwekutanga, iwe uchaona sarudzo yekungotamba iyo Slideshow muhwindo pane kuzara-skrini. Izvo hazviite sekunge iko kurongeka kunogona kuponeswa nehurukuro.
Nenzira… kana iwe ukaona kuti ndinoshandisa ese Slide Show uye Slideshow muchinyorwa chino, imo nekuti Microsoft inoreva kuratidzwa kunoenda kunorarama seSlide Show nepo Apple ichireva seSlideshow. Usandibvunze kuti nei mamwe emakambani ehunyanzvi asingakwanise kungotevedzera mutauro mumwe chete… Ini ndakangozvinyora nenzira yavakaita.
Tags: Google Sanganamicrosoft PowerpointMicrosoft Teamonline onlineonline musanganopowerpointgovana hwindoshare skrinislide showslide show marongeroSlideshowchiitiko chaichoWEBINARhwindoZoom